OED COVID-19 | Xatooyada Aqoonsiga Shaqa-La'aanta iyo Khiyaanada…
Xatooyada Aqoonsiga Shaqa-La'aanta iyo Khiyaanada Caymiska Shaqa-La'aanta
Khiyaanada caymiska shaqa-la'aanta ayaa ah arrin qaran, la dagaalanka khiyaanada ayaa leh ahmiyad hay'adeed oo socota. Tan iyo markuu bilawday safmareenka, been-abuureyaal iyo khiyaameeyeyaal ayaa si sharci-daro ah uga heleen balaayiin doolar oo macaashka caymiska shaqa-la'aanta dalka oo dhan. OED waxay si firfircoon uga shaqeyneysaa kahortagga, ogaanshaha, iyo baaritaanka khiyaanada. Waxaan iska saarnaa waajibaad inaan u ilaalino macluumaadkaaga gaarka ah, lacagaha dawladda, iyo Sanduuqayaga Amaanada si aad ah.
Aqoonso oo Iska Ilaali Khiyaanooyinka Caymiska Shaqa-la'aanta
Guud ahaan, qaad tallaabooyinkaan si aad isaga difaacdo khiyaanooyinka shaqa-la'aanta:
Marnaba macluumaadkaaga gaarka ah ha ku dirin iimayl ama farriin gaaban ahaan.
Ha u dirin lacag elektaroonig ahaan, oo had iyo jeer iska indhatir codsiyada soo socda:
Wadaxiriirada la xiriira macaashyadaada caymiska shaqa-la'aanta ee qof ku weydiisanaya lacag;
Qofkii ku dhaha waxaan khidmad kuugu xareyn karaa qaansheegashadaada; iyo
Qof kasta oo sheeganaya inuu u shaqeeyo Waaxda Shaqaaleynta ee sheega inuu kaa rabo khidmad si loo dhammeystiro codsigaaga.
Marnaba kaama codsan doono lacag si aad u hesho macaashyadaada.
FIIRO GAAR AH: UMA dirno farriin gaaban qaansheegteyaasha.
Ha aaminin ama ha isku halleynin caymiska shaqa-la'aanta (UI) ee ku jira mareegaha aan rasmiga ahayn – had iyo jeer booqo unemployment.oregon.gov si aad u hesho macluumaadka qaansheegashada shaqa-la'aanta ee Oregon.
Ka fogow cinwaanada mareegaha ama cinwaannada iimaylka ee AAN ku dammaanin .gov.
Hubi in cinwaanka Twitter-ka sax yahay. Keena waa @ORemployment.
Hubi inta ay dhan yihiin dadka ka helay iyo ku xiran bogga Facebook-ga. Bogga rasmiga ee OED Facebook waxaa ka helay dad ka badan 11,000 waana la xaqiijiyay (wuxuu leeyahay calaamad buluug ah).
Wixii macluumaad dheeraad ah, waxaan kugula talineynaa inaad wax badan ka ogaato:
Kiisaska la ogyahay ee khiyaanada iyo been-abuurka
Mareegta Xatooyada Aqoonsiga ee Waaxda Shaqaalaynta ee Mareykanka
Digniinta FBI ee Dadka Sida Sharci-darrada Lacagaha u Dira
Xatooyada Aqoosiga Shaq-la'aanta
Gobollada oo dhan waxay la kulmeen kororka khiyaanooyinka qaansheegashooyinka shaqa-la'aanta ee ay xareeyeen ururrada dambiileyaasha ah iyagoo adeegsanaya aqoonsiyo la xaday ee ay ka heleen jebinta xogta qaranka ee hore. Xadgudubyadaan badankooda ayaa dhacay waqti hore waxayna ku lug lahaayeen dadaalo dembiyeed oo waaweyn oo aan la xiriirin shaqa-la'aanta. Dembiileyaashu waxay adeegsanayaan aqoonsiyadaan la xaday si ay been u sheegaan oo si khiyaano khiyaano ku jirto uga qaataan gobolo badan.
Khiyaanooleyaasha ka dambeeya khiyaanada caymiska shaqla-la'aanta (UI) waxay u muuqdaan inay adeegsanayaan lambarrada Sugnaanta Bulshada iyo macluumaad kale ee shaqsiga lagu garan karo si ay u codsadaan una helaan macaashyada caymiska shaqla-la'aanta (UI). Inta badan, dhibbaneyaasha ma oga in xogtooda gaarka ah ay ku jirtay gacmo khaldan.
Si looga hortago dadka khiyaameeyeyaasha inaysan ku kicin xatooyada aqoonsiga shaqa-la'aanta, waxaan ka dhignay hanaankeena sugnaanta iyo xaqiijinta Aqoonsiga mid aad u xoogan innagoo iskaashi la sameynayno ID.me, shirkad ku takhasustay ilaalinta aqoonsiga dhijitaalka ah. Haddii aad iimayl ka hesho ID.me, waa inaad dhammaystirto hanaanka xaqiijinta si ay u sii socoto inaad hesho macaashyada.
Calaamadaha lagu garto inaad dhibbane u noqon xatooyada aqoonsiga shaqa-la'aanta
Badankood dhibbaneyaasha xatooyada aqoonsiga shaqa-la'aanta ma oga in qaansheegashooyinka la xareeyay iyo/ama macaashyada la qaatay iyadoo la adeegsanayo aqoonsigooda. Dad badan ayaa ogaada oo keliya xatooyada aqoonsiga shaqa-la'aanta inay dhacday markay warqad ka helaan boostada, sida lacag-bixin ama foomka canshuurta ee 1099-G oo ay dowladdu soo saarto oo khaldan ama logu talagalay macaashyada aan la helin. Halkan waxaad ka heli tusaalaha foomka 1099-G.
Haddii cinwaankaaga boostada oo sax ah aan hayno, waxaan kuu soo diri doonaa foomka canshuurta oo wax laga beddelay. Haddii aad u baahan tahay foomka cashuurta oo loo beddelay sababtan awgeed, si dhakhso ah ula xiriir Waaxda Shaqaalaynta adoo u maraya boggayaga Nala Soo Xiriir . Wixii caawimaad ah ee la xiriirta xareynta canshuuraha, kala tasho khabiir ku takhasusay canshuuraha.
Waxaad noqon kartaa dhibbanaha xatooyada aqoonsiga shaqa-la’aanta haddii aad heshay:
Warqad ka socota hay'ad dawladeed oo ku saabsan qaansheegashada shaqala'aanta ama lacag-bixinta oo AADAN dhowaan xareynin macaashyada shaqa-la'aanta. Tani waxaa ka mid ah lacag-bixinnada lama filaanka ah ama kaararka deynta oo waxay ka imaan karaan gobol kasta.
Foomka cashuuta 1099-G ee ka tarjumaya macaashyada shaqa-la'aanta ee AADAN fileynin. Sanduuqa 1 ee foomkan ayaa laga yaabaa inuu muujiyo macaashyada shaqa-la'aanta ee aadan helin ama qaddar ka badan diiwaanadaada macashyada shaqa-la'aanta ee aad heshay. Foomka laftiisa ayaa laga yaabaa inuu ka yimid gobol aadan ku nooleyn ama aadan ka xareynin macaashyada.
Markaad weli shaqeynayso, ogeysiin ka socota shaqo-bixiyahaaga oo kuu sheegaysa in batroonigaagu helay codsi ku saabsan macluumaadkaaga qaansheegashada shaqa-la'aanta oo magacaaga ku qoran balse aadan adigu xareyn.
Waxa la sameeyo haddii aad dokumentiyo ka hesho OED balse aadan codsan macaashyada
Haddii aad ka hesho foomka canshuurta 1099-G Waaxda Shaqaalaynta oo AADAN xareynin ama helin macaashyada shaqa-la'aanta, isla markiiba nala soo xiriir. Haddii aan xaqiijino in xatooyada aqoonsiga ay dhacday, ma ahan inaan kuu soo sheegno qaddarta ku qoran 1099-G ee ku socota IRS.
Haddii aad hesho jeegag ama US Bank Reliacard , dib ugu soo dir jeegaga iyo Reliacard-yada Waaxda Shaqaalaynta:
Fadlan ku dar sharraxaad kooban sababta aad alaabtaan u soo celineyso si aan u ogaano tallaabada aan qaadi lahayn, oo nala soo socodsii haddii aad u baahantahay inaad xareysato qaansheegashada macaashyada ee gaarka kuu ah. Mar alla marka caddeyn la ururiyo lana xaqiijiyo in xatooyada aqoonsiga ay dhacday, waan joojin doonaa jeegaga iyo qaansheegashada shaqa-la'aanta ee khiyaanada ah.
Waxa la sameeyo haddii aad tahay dhibbane xatooyo aqoonsiga shaqo la'aanta
U soo sheeg xatooyada aqoonsiga shaqa-la'aanta OED sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah adoo u maraya foomka Soo Sheegida Xatooyada Aqoonsiga ee Waaxda Shaqaalaynta, adoo naga soo wacaya 877-345-3484, ama adoo u maraya bogga Nala Soo Xiriir.
Waxaa laga yaabaa inaadan naga helin xaqiijin marka aad gudbiso warbixin, balse waxaa ku soo wici kara baare haddii aan u baahanahay macluumaad dheeraad ah. FIIRO GAAR AH: Aqoonsiga Wacaha ayaa laga yaabaa inuusan oran OED.
Waxaan codsan karnaa dokumenti dheeraad ah (sida warbixin boolis ama warqad dhaarasho) si aan u dhameystirno baaritaanka. Waxaan dib-u-eegi doonaa kiiskaaga oo go'aan ka gaari doonaa. Gobol kasta wuxuu leeyahay shuruudo kala duwan iyo habab kala duwan oo loogu talagalay baaritaanka xatooyada aqoonsiga.
Haddii aad hesho foomka canshuurta 1099-G ee macaashyada aadan qaadan, waxaan u baahan doonaa inaan soo saarno foomka canshuuraha 1099-G oo sax ah waxaana la cusbooneysiin doonaa diiwaanka canshuuraha iyadoo IRS ku metelayso.
Dhibbaneyaasha xatooyada aqoonsiga ee kharash gareeyay ama dib u dhigay celinta lacagta waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay si dhakhso leh noola soo xiriiraan. Haddii kale, adiga ayaa mas'uul ka ah inaad ku sheegto canshuur-celintaada, oo waxaad heli kartaa lacag-bixin xad-dhaaf ah oo khiyaano kugu soo gashay mustaqbalka. (Lacag-bixinta xad-dhaafka ah waxay ka dhigan tahay in lagu siiyay macaash aadan u-qalmin. Waa inaad dib u bixiso macaashyada aad heshay.)
La shaqee xirfadlaha canshuuraha ama raac tilmaamaha IRS si aad u xareyso canshuurahaaga haddii aad heshay foomka 1099-G oo aan sax ahayn iyadoo ugu wacan khiyaanada.
Ka hubi warbixinta amaahdaada wax ku shaki geliya ama xariijimaha amaah ee aadan oggolaan ee la qaatay.
Xeerarka dawladda ayaa kuu oggolaanaya inaad ka codsato hal warbixin deymeed oo bilaash ah sannadkiiba mid kasta oo ka mid ah saddexda xafiis ee amaaheed (Equifax, Experian, Transunion) adoo u maraya AnnualCreditReport.com ama wac 1- 877-322-8228. Waxaa lagaa rabi doonaa inaad bixiso magacaaga, cinwaankaaga, lambarkaaga sugnaanta bulshada, iyo taariikhda dhalashadaada si loo xaqiijiyo aqoonsigaaga.
Si aad u hesho macluumaadka iyo tallaabooyinka lagu ilaalinayo amaahdaada iyo xitaa wax ka badan, booqo bogga Warbixinta Amaahda ee ku yaala mareegta macmiilka ee Guddiga Ganacsiga ee Dawladda (FTC).
Beddel fureyaasha sirta ah ee cinwaanadaada oo ka dhigo fureyaashaada sirta ah kuwo adag si dadka kale aysan si fudud ugu gelin cinwaanadaada.
La xiriir bixiyeyaashaada maaliyadeed (bangiyada, shirkadaha kaararka deynta, iwm.) si aad u muujiso isweydaarsiyada ganacsi ee aan caadi ahayn.
U soo sheeg xatooyada aqoonsiga shaqa-la'aanta ee dhacday inta lagu guda jiray safmareenka COVID-19 Xarunta Qaranka ee Musiibooyinka Khiyaanada ee Waaxda Caddaalada.
Marka laga reebo u sheegida gobolka, u sheegida Xarunta Qaranka ee Musiibooyinka Khiyaanada ayaa ka caawisa fulinta sharciga joojinta xatooyada aqoonsiga shaqa-la'aanta ee mustaqbalka. Ka xareynta warbixintan Xarunta Qaranka ee Musiibooyinka Khiyaanada ayaa sidoo kale ogeysiin doonta Xafiiska Kormeeraha Guud ee Waaxda Shaqaalaynta ee Mareykanka, oo ah hay'adda koowaad ee mas'uulka ka ah baaritaanka khiyaanada shaqa-la'aanta. Waxaa suurtagal ah inaadan helin jawaab kadib markaad gudbiso macluumaadkan.
Ugu soo sheeg xatooyada aqoonsiga Guddiga Ganacsiga ee Dawladda lambarka 1-877-ID-THEFT (438-4338) ama booqo identitytheft.gov .
La xiriir waaxda booliska ee deegaankaaga . Waxaa laga yaabaa inay sidoo kale hayaan tallooyin kale.
Ogeysii Xafiiska Kormeeraha Guud in lambarkaaga sugnaanta bulshada (SSN) si khiyaano leh loogu isticmaalay oig.ssa.gov/report
Ka codso nuqul ka mid ah Warbixinta Mushaarkaaga iyo Macaashkaaga Waaxda Shaqaalaynta ee Oregon si aad u hubiso inay sax tahay. Waxaad codsan kartaa nuqul adoo u maraya bogga Nala Soo Xiriir ama adoo wacaya (877) 345-3484.
aLa xiriir IRS si aad u soo sheegto xatooyada aqoonsiga iyo in Lambarkaaga Sugnaanta Bulshada (SSN) loo isticmaalay in loogu xareeyay si khiyaamo ah codsiga qaansheegashada shaqa-la'aanta. Booqo mareegta IRS si aad u ogaato sida loo xareeyo canshuurahaaga kadib khiyaanada Caymiska Shaqa-la'aanta (UI) ama xatooyada aqoonsiga.
Khiyaanada Caymiska Shaqa-la'aanta
Khiyaanada caymiska shaqa-la'aanta waxay dhacdaa marka qof uu bixiyo macluumaad khaldan ama si ula kac ah u qariyo xaqiiqooyin si ay u helaan macaashyada. Haddii aad si ula kac ah u qariso ama u soo sheegto macluumaad khaldan, taasi waa khiyaano. QIYAANADU WAA DANBI waxaana ka dhalan karaan ganaaxyo gaarayo ilaa oo ay ku jirto dacwad ciqaabeed.
Shaqo-bixiyeyaasha iyo qaansheegtayaasha waxay geli karaan khiyaano marka loo eego sharciyada caymiska shaqa-la'aanta ee gobolka. Khiyaanada shaqo-bixiyaha waxaa ku jiri kara sameynta waxyaabo si looga fogaado mas'uuliyad canshuureed ama sameynta koontooyin shaqo-bixiye oo been-abuur ah si qaansheegashooyinka khiyaanada looga sameeyo koontadaas.
Khiyaanada qaansheegtaha waxaa ka mid noqon kara:
Bixinta adoo og macluumaad been-abuur ah ama qarinta macluumaad si aad u hesho macaashyada
Sii wadista qaadashada macaashyada adigoo og inaad u-qalmin
Intaas waxaa dheer, xatooyada aqoonsiga waxay sababi kartaa khiyaanada caymiska shaqa-la'aanta ee UUSAN khaladka ku laheyn shaqo-bixiyaha ama dhibbanaha xatooyada aqoonsiga.
Gobol kasta waxaa looga baahan yahay, lana filayaa, inuu dhaqangeliyo sharcigiisa caymiska shaqa-la'aanta.
Sida loo soo sheego khiyaanada caymiska shaqa-la'aanta
Haddii aad ogtahay ama aad ka shakisan tahay qofsi sharci-darro ah u qaadanayo macaashyadaada caymiska shaqa-la'aanta, u soo sheeg Waaxda Shaqaalaynta ee Oregon.
Ku Soo Sheeg Onlaynka: Buuxi oo soo gudbi foomka Gudbinta Macluumaadka Baaritaannada ee Khiyaanada Caymiska Shaqala'aanta (UI) . FIIRO GAAR AH: Waxaa laga yaabaa inaadan naga helin xaqiijin degdeg ah marka aad gudbiso warbixin.
Ku Soo Sheeg Telefoonka: Ka wac Xakamaynta Bixinta Macaashka 503-947-1995 ama 1-877-668-3204
Waxaad sidoo kale ku soo sheegi kartaa khiyaano la tuhunsan yahay adoo u maraya boggayaga Nala Soo Xiriir .
Haddii aad shaqo-bixiye tahay oo aad aaminsan tahay in qof uu helay macaashyo uusan u-qalmin, noo soo sheeg. MUHIIM! Shaqaaluhu wali way u-qalmi karaan macaashyada shaqa-la'aanta haddii ay u diidaan dalabka shaqo ku habboon sababo* la xiriira COVID-19 sida lagu qeexay sharciyadayada kumeelgaarka ah.
Ku Soo Sheeg Onlaynka: Buuxi oo soo gudbi foomka Diidmada Shaqada ee Shaqo-bixihuhu Ka Warbixiyo
Ku Soo Sheeg Telefoonka: Ka wac Xakamaynta Bixinta Macaashka 503-947-1995 ama 877-668-3204
*Shaqaaluhu wali way u-qalmi karaan macaashyada shaqa-la'aanta hadday:
Waxa la sameeyo haddii macaashyadaada la xayiro iyadoo ugu wacan khiyaano la tuhunsan yahay
Haddii koontadaada Reliacard loo xayiray iyadoo ugu wacan tahay khiyaano la tuhunsan yahay oo aan xaqiijino in khiyaano aysan dhicin, waxaan codsan doonaa xayiraada inuu qaado U.S. Bank. MA awoodi doontid inaad dedejiso hawshan adigoo laftaada la xiriiraya US Bank. Kahor inta uusan xannibaada qaadin, U.S. Bank iyo Waaxda Shaqaalaynta ayaa laga yaabaa inay kaa rabaan inaad xaqiijiso aqoonsigaaga (ID). Diyaar u noqo inaad u keento caddeyn aqoonsi US Bank iyo Waaxda Shaqaalaynta.
Haddii lacagaha si toos ah loogu shubo koontadaada oo AADAN isku diiwaangelin inaad hesho deebaaji toos ah, nala soo xiriir isla markiiba.
Haddii qaansheegashadaada loo joojiyo khiyaano la tuhmayo awgeed, waxaan kaa rabnaa inaad keento caddeyn aqoonsi inta aynu dib u bilaabin bixinta macaashyada.
Waxaan sidoo kale iskaashi la sameynay ID.me si loo xaqiijiyo aqoonsigaaga. Haddii aad iimayl ka hesho ID.me, fadlan dhammeystir geedi-socodka si loo fasaxo qaansheegashadaada. HA WADAAGIN IIMAYLKA. Haddii qof caddeeyo aqoonsigiisa kaasoo AAN si toos ah iimayl nooga helin, qaansheegashadiisa dib ayaa loo dhigi doonaa.
Macaashyada laguma bixin doono qaansheegashooyinka haddii aqoonsigaaga aan la xaqiijin karin. Waa mas'uuliyad ku saaran inaad hesho aqoonsi sax ah, oo la mid ah midka geedi-socodka U.S. Bank ee loogu talagalay xaqiijinta Aqoonsiga. Haddii aad u baahan tahay caawimaad si aad u hesho ama aad u beddesho aqoonsi, barnaamijka STEP ama 211.org ayaa kaa caawin kara.
Qaansheegashooyinka La Jabsaday
“Qaansheegasho la jabsaday” waxay dhacdaa markii qof ula wareego qaasheegashadaada si ula kac ah oo uu sii wado inuu u sheegto ADIGA ahaan. Waxay beddeli karaan macluumaadka ku saabsan qaansheegashadaada, oo ay ku jiraan FURAHAAGA iyo su'aalaha sugnaanta, si ay u helaan macashkaaga. Haddii aad ka shakisan tahay in codsigaaga la galay ama qof kale la wareegay, u soo sheeg Waaxda Shaqaalaynta isla markiiba. Haddii takhasusle qaansheegasho uu ka shakiyo qaansheegashadaada in lala wareegay, way ku soo gudbin doonaan si qaansheegashadaa loo baaro.
Haddii aan ka shakino xatooyo aqoonsi, lacagta qaansheegashadaada ayaa joogsan doonta. Haddii aad macaash hesho iyadoo loo marayo U.S. Bank Reliacard, kaarka waa la hakinayaa ilaa aan ka xaqiijin karno in xatooyo aqoonsi ay dhacday. Haddii aad macaash hesho iyadoo loo marayo deebaaji toos ah, lacagaha waa la hakin doonaa.
Ku Soo Sheeg Telefoonka: Wac 877-345-3484
Waxaad sidoo kale soo gudbin kartaa qaansheegasho lala wareegay oo la tuhunsan yahay iyadoo loo marayo boggayaga Nala Soo Xiriir.
Si loo bedello diiwaanka qaansheegashada, waxa kaliya qofku u baahan yahay waa lambarkaaga aqoonsiga macaamiil (CID) iyo FURAHAAGA. Waa mas'uuliyad ku saaran inaad hubiso in FURAHAAGA sugan yahay oo qof kale uusan si sahalan u qiyaasi karin.
HA LA wadaagin FURAHAAGA qof kale.
HA LA wadaagin FURAHAAGA qof kale oo kuu xareynayo qaansheegashadaada.
HA isticmaalin afarta lambar ee ugu dambeeya Lambarkaaga Sugnaanta Bulshada (SSN).
HA isticmaalin taariikhaha dhalashada.
HA ku celcelin lambarrada sida 1111 ama 1234.